नेपाली चेली अनिता भन्छिन्– अष्ट्रेलिया आएँ, पाउनु दु:ख पाएँ (भिडियो सहित) - Naya Pusta
नेपाली चेली अनिता भन्छिन्– अष्ट्रेलिया आएँ, पाउनु दु:ख पाएँ (भिडियो सहित)
Naya Pusta २०७४ असार ३१ August 4, 2017 गते प्रकाशित
सिड्नी । अष्ट्रेलिया अहिले नेपालीहरूको एक सपनाको देश हो । प्रायः नेपाली राम्रो कमाई गर्ने र पढ्नेसमेतको लक्ष्य राखेर ठूलो रकम खर्च गरी अष्ट्रेलिया आउँछन् । तर, यहाँ कति दुख छ ? कति पीडा छ भन्नेचाहीँ अनिता सुवेदीलाई थाहा छ।
उनले पाएको दुखको कथा यति असामान्य छ की उनका शव्द गीतमा नै उतारिएको छ । नजिकिँदै गरेको तिजलाई सन्दर्भ बनाएर उनले ‘अष्ट्रेलिया आएँ बरी लै, पाउनु दुख पाएँ बरी लै’ भन्दै गीत लेखिन् जसमा लोकगायीका मञ्जु पौडेलको आवाज रहेको छ।
जसको म्युजिक भिडियो समेत तयार भइसकेको छ । गीतको लय गायक खुमन अधिकारीले तयार पारेका हुन्। अडियो, भिडियो विएमएस फिल्मस्ले तयार पारेको हो। ‘नजाऊ मलाई आमा भन्थ्यौं, आएँ आफ्नै रहरले, पिआर पाउने मिठो सपना र तान्य मलाई डलरले’, अनिताले आफ्ना भावलाई शव्दमा उतारेकी छिन्।
कुन्ती र पवित्राले अभिनय सहित नृत्य गरेको म्युजिक भिडियोमा सुवेदीका अष्ट्रेलियामा भोगेका पारिवारिक गाथालाई लयात्मक बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ। नमितचन्द ठकुरीले छायाङ्कन गरेको म्युजिक भिडियोमा इन्दु पोखरेलको मेकअप र विष्णु शर्माको सम्पादन रहेको छ। सिड्नीका विभिन्न पार्कहरूमा छायाङ्कन गरिएको भिडियोको निर्देशन विजय थापाले गरेका हुन्।
फेसबुकमा अश्लील फोटो पोष्ट हुन थालेपछि ज्योती मगर प्रहरीको शरणमा
सन्नी लियोन पोर्नस्टारमा लाग्नुको पछाडी यस्तो रहस्य !
फ्लप भएपछि कपिलको शो बन्द, त्यही समयमा सुनीलले चलाउँदै छन् नयाँ शो